TSCM, shirkadda Apple ee alaab-qeybiyaha, waxay dhisi doontaa ilaa 6 shirkadood oo ku kala yaal Arizona (USA) | Waxaan ka socdaa mac
TSCM, alaab-qeybiyaha Apple, wuxuu dhisi doonaa illaa 6 shirkadood oo ku kala yaal Arizona (USA)
Manuel Alonso | 05/05/2021 16:00 | Noticias
Shirkadda qaabeynta qandaraaska qandaraaska badan ee caalamiga ah ee Taiwanese oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Taiwan kana mid ah kuwa adduunka ugu qiimaha badan, waxay ka dhisi doontaa Arizona warshado cusub. TSCM waxay horey u shaacisay sanadkii hore inay doonayso inay ka dhisto Grand Canyon State. Laakiin warbixinno cusubi waxay tilmaamayaan inaysan noqon doonin oo keliya hoosaad la abuuri doono laakiin ay xitaa hadal hayaan ilaa lix.
Sida ay wararku sheegayaan, el Apple's M iyo taxane sameeye 'TSMC chip' waxay qorsheyneysaa in ay dhisto wax ka badan kaliya warshadda jabinta ee Mareykanka oo keliya lagu dhawaaqay. Gaar ahaan magaalada Colorado Canyon, Arizona. Bishii Meey 2020 waxaa la sheegay in shirkaddu ay gobolka ka dhisi doonto warshad ku kacaysa $ 12.000 bilyan. Xarunta ayaa la filayaa inay bilawdo wax soo saar mug leh sanadka 2024.
Seddex ilo wareed oo arintan wax ka ogaa, oo diiday in magacooda la shaaciyo maadaama aan loo ogoleyn inay la hadlaan warbaahinta, ayay u sheegeen Reuters in ilaa shan warshadood oo kale la qorsheynayo. Ma cadda waxa soosaarka dheeriga ah iyo awooda maalgashi ay noqon doonaan waxay matali karaan warshadan dheeriga ah iyo tikniyoolajiyadda sameynta jibbaarada ay isticmaali doonaan. TSMC waxay sheegtay bishii la soo dhaafay inay qorsheyneyso inay maal gasho $ 100.000 bilyan saddexda sano ee soo socota si kor loogu qaado awooda wax soo saarka, inkasta oo aysan bixin faahfaahin
Iyadoo la tixgelinayo cillad yaraanta ay shirkadaha tikniyoolajiyadda hadda haystaan, warkan ayaa ku soo hagaagaya. Caqli ahaan maahan daqiiqadan gaarka ah, laakiin waxaa loogu talagalay dhacdooyinka la midka ah ee mustaqbalka waxa hadda socda. Apple waxay si aad ah uga faa'iideysan doontaa inay yeelato warshado wax soo saar jilicsan oo aad u dhow waxayna awoodi doontaa inay hoos u dhigto kharashyo badan.
Sidoo kale maskaxda ku hay in dowladda Biden ay diyaarineyso inay ku bixiso tobanaan bilyan oo doolar si ay u taageerto soo saarista Chips gudaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » TSCM, alaab-qeybiyaha Apple, wuxuu dhisi doonaa illaa 6 shirkadood oo ku kala yaal Arizona (USA)
AirTag dib ma loo cusbooneysiin karaa? Ka waran haddii aan helo mid ama aan doonayo inaan iibiyo?
Sida loo badalo magaca AirTags-kaaga